Cilmibaaris Reergalbeed ah: Islaamka oo Noqonaya Diinta Ugu Ballaaran Dunida – Goobjoog News
Cilmibaaris Reergalbeed ah: Islaamka oo Noqonaya Diinta Ugu Ballaaran Dunida
Islaamku waa diinta keliya ee ka kobaca badan heerka kororka dadka adduunka, waxayna noqoneysaa diinta dunida ugu ballaaran marka la gaaro sanadka 2070, waa sida lagu sheegay baaritaan ay sameeysay xarunta cilmibaariska “Pew” ee dalka Mareykanka.
Xarunta cilmibaarista “Pew” ee dalka Mareykanka ayaa waxa uu cilmibaaris ku sameysay isbedellada Diimaha dunida iyo heerka koritaankooda, tirada muslimiinta dunida ayay ogaaday iney kordhayaan 73% inta u dhaxaysa sanadada 2010-2050, marka loo barbardhigo masiixiyadda oo sameynaysa kobacdhan 35%, waana tan labaad ee ugu kobaca badan, sida lagu sheegay warbixinta ay faafisay jariida The Telegraph ee ka soo baxda dalka Britain.
Iyadoo isla xilligaas 2010-2050 tirada dadka dunidu ay kordheyso in le’eg 37%.
Warbixinta ayaa lagu sheegay haddii heerka kororka Islaamku uu ku socdo qiyaastaas 2050, waxaa imaneysa marka la gaaro sanadka 2070 in dadyowga dunidu intooda badani ay noqonayaan muslimiin.
Dadka muslimiinta ah xilligaas waxay noqonayaan 10% dadka ku nool qaaradda Yurub.
Sandkii 2010, dunida waxaa la qiyaasay iney ku noolyihiin 1.6 Bilyan oo Muslimiin ah iyo 2.17 Bilyan oo Masiixi ah.
Sanadka 2050, tirada Muslimiinta waxaa la qiyaasayaa iney noqoneyso 2.76 Bilyan oo qof, halka tirada masiixiyiintuna noqoneyso 2.92 Bilyan oo qof, haddii qiyaasta kobaca diimaha uu kusocdo heerka cilmibaarista lagu ogaaday, sanadka 2070 tirada Muslimiinta dunida ku nool ayaa ka badaneysa tan masiixiyadda.
Warbixinta ayaa intaa sii raacisay sanadka 2050 in dadka diin la’aanta ah ayaa ka yaardoonta 13.2% iyadoo hadda lagu qiyaaso 16.4%, waxaan lagu sheegay in Yurub iyo waqooyiga Mareykanka ay dadkaasi ku sii badan doonaan.
Kobaca ayaa laga eegay heerka caruur dhalista oo ay ugu sarreeyaan Muslimiinta oo ah 3.1 canug ay dhalikarto haweenay kasta, halka hooyada Masiixiga ah lagu qiyaasay iney dhalikarto celceliska ah 2.7 canug haween kastaa.
Cilmibaarista ayaa lagu ogaaday sidoo kale, in diinta Islaamku tahay tan ugu da’yarta badan, marka loo eego diimaha kale, 34% da’doodu way ka yartahay 15, waa marka la barbardhigo heerka caalamiga ah oo dadka 15 ka yar dunida uu yahay 27% oo kaliya.
Diinta masiixig ah ayaa waxaa haysta in dadbadan oo haystaa ay ka sii baxayaan oo ay isku bedelayaan diin la’aan ama ay u digorognayaan diimo kale, waxaan la filayaa in 40 milyan oo qof iney qaataan Masiixiyadda, halka 106 milyan oo qof ay ka tagayaan si la mdi ah.
Cilmibaarista ayaa waxaa lagu soo koobay ra’yi uruurin laga sameeyay sanadkii hore qaaradda Yurub oo ku aaddan sida ay u arkaan dadka Muslimiinta ah.
Warbixinta ayaa lagu sheegay :” Dadbadan oo ka mid ah dalalka Hungary, Talyaaniga, Poland, Griigga ayaa sheegay inaaney si fiican u arkin dadka muslimiinta ah, laakiin aragtida taban wey sii yaraaneysaa marka aad eegto dalalka Faransiiska, Germany, Ingiriiska iyo meelo kale oo waqooyiga iyo galbeedka Europe ah”.
Waxay intaa ku sii dareen: “Dadka isku tiriyada midigta fog ayaa ah dadka u badan ee aragtida Taban ka haysta marka loo eego kuwo aaminsan aydaloojiyadda bidixda ah”.
Si kastaba, warbixinnada noocan oo kale ah iyo cilmibaarista xooggan leh ayaa muujinaya sida walwalka leh ee reer galbeedku isha ugu hayaan kobaca iyo heerka kororka dadka muslimiinta ah ee dunida kusii kordhaya.
Cilmibaaris Cusub: Guurku Waxa uu Aad Uga Caafimaad Badan Yahay Doobnimada
B/weyne: Booliiska Oo Ka Gadooday Mushaar La’aan
Dab Ka Kacay Guri Ku Yaalla Degmada Wadajir Ee Muqdisho